Igumbi labucala kwi-Estate ubukhulu bendlu, uluntu olunamasango
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguDan
Sikwikhaya elikhulu kakhulu kwindawo enamasango kweyona ndawo ibalaseleyo yeAntelope Valley. Sihamba umgama oya kwivenkile yokutya, iindawo zokutya okukhawulezayo, ipaki kunye neendawo zokubaleka. Uya kuyithanda indawo yam ngenxa yendawo kunye nommelwane. Indawo yam ilungile kwabatshatileyo, abahambi bebodwa, kunye nabahambi beshishini.
*Sinegumbi elikhulu elihlala abantu aba-4 ukuya kwaba-6 kwaye linokuhlala abantwana, linebhedi eyi-Queen e-1, olunye undwendwe luza kumisa kwikhaphethi yoomatrasi womoya, iingubo, iibhegi zokulala ozinikezelayo.
Eli likhaya elilingana nezindlu (ngaphezu kwe-5,000 sq ft) kwindawo enesango, ebekwe kweyona ndawo inqwenelekayo kwiNtlambo yase-Antelope. Umphezulu uvaliwe, kodwa kukho indawo yokuhlala eyaneleyo ezantsi. Ukuhamba umgama ukuya kwiivenkile ... indawo enkulu yosapho. Qhuba ukuya Burbank kunye neendawo Valley, Iiflegi ezintandathu ipaki yokonwabisa malunga 45 mins kude. Ndwendwela iindawo zedolophu yase-LA ukuze ubone indawo.
Le yindawo yosapho ejolise kusapho kwindawo yangasese yangasese. Izindlu ezinobungakanani bezindlu ezinooGqirha abaziingcali, amaGqwetha kunye nabanye abaninzi. Ukuhamba umgama ukuya kwivenkile yokutya, ukutya okukhawulezayo, ikhemesti kunye nezicoci ezomileyo. Ipaki kunye neendawo zokubaleka ezikufutshane. Iziko lokuthenga kunye neendawo zokuzivocavoca kumgama weemayile ezimbalwa
Kukho umntu okhoyo wokunxibelelana neendwendwe njengoko kufuneka. Sinikeza iibhegi kunye nekofu ngentsasa yokuqala kwiindwendwe ezihlala ixesha elide kuneentsuku ezi-3.